Na-eme nke ọma na sistemụ ahịa ahịa azụmaahịa | Martech Zone
Na-eme nke ọma na sistemụ ahịa ahịa azụmaahịa
Gba obere ụlọ ahịa na-ere ahịa bụ ọrụ siri ike, nke chọrọ onye nwe ụlọ ahịa ka ọ bụrụ onye na-azụ ahịa na onye na-ere ahịa na mgbakwunye na ịzụ ahịa ha. Enwetara m akwụkwọ na nso nso a site na Elliot Yeo site na Ọganihu, A ngwanrọ ngwanrọ wuru iji nyere obere ndị na-ere ahịa aka na ịgba ọsọ na imeziwanye azụmahịa ha.
Ozugbo usoro a nwere nkọwa gbasara ahịa na ahịa gị, ọ na-enye ndụmọdụ nwere ọgụgụ isi:
Nakwa, usoro ahụ nwere usoro njikwa mgbasa ozi zuru ezu iji nye gị nzaghachi na mbọ ị na-agba.
The ike nke Ọma bụ na ọ na-enye ịrịba ozi na ọrụ n'ime azụmahịa gị. Ọ ga-amasị m ịhụ sistemụ nyocha nchọta mpaghara nsonaazụ, nlekota oru na ụzọ iji jikọta mobile na email ahịa n'ime azụmahịa. A na - eme ọtụtụ ọrụ obere ụlọ ahịa site na azụmaahịa a na - akwụ ụgwọ ma na - enyekwa ohere - iwepụta ozi email ma ọ bụ ozi ederede nye ndị na - enyere gị aka nwere ike ibuga dollar ozugbo na akara gị!
A bụ ihe dị mkpirikpi video na-akọwa Ọma:
Na nyochaa saịtị ahụ, ejiri m n'aka na ndị otu aka ya naa mwekota - ya mere ikekwe nlebanye anya saịtị ga-agbada n'okporo ụzọ ahụ!
Jiri Mobile Nweta Email ndị debanyere aha